Na Ọktọba 15 Apple ga-emeghe ụlọ ahịa Regent Street | Esi m mac
Na Ọktọba 15, Apple ga-emepe ụlọ ahịa Regent Street
Nke a bụ otu n’ime ụlọ ahịa Apple kacha mara amara nke ndị na-eso ụzọ ụlọ ọrụ apụl bitten na ụlọ ahịa a, nke dị na London, a na-ahụta ka otu n’ime ihe ndị kachasị mma n’ihi ọnọdụ ya. Lọ ahịa a agbanweela ọtụtụ mgbanwe na usoro nke ụlọ ahịa na ime ụlọ n'onwe ya. Taa Apple nwere nnukwu ọkọlọtọ nwere iPhone 7 ọhụrụ na Jet Black agba (nke ndị dị ụkọ) yana na ala ọ dọrọ aka na ntị maka ụbọchị mmeghe, nke na-esote Ọktọba 15.
Lọ ahịa ahụ a na-arụ ọrụ kemgbe May 2015 gara aga ma o doro anya na arụ ọrụ dị ukwuu iji mee ka ụlọ ahịa ahụ dị ka nke ọhụrụ. Na ụkpụrụ, ọrụ ahụ lekwasịrị anya na ime ka ụlọ ahịa ahụ nwee ike ịnweta ndị ọbịa niile ma n'otu oge ahụ ọkụ ọkụ na-adaba n'ime. Na nkenke, ihe a nwalere ya bụ inye ya ọhụụ ọhụụ ma belata oghere maka ndị ọrụ ma mezigharị facade nke ụlọ ebe ụlọ ahịa mepere ụzọ ya na 2004 na nke na-enweta nkezi nke ndị ọbịa 4 kwa afọ. Ọzọkwa, ụlọ ahịa ahụ ga-arụ ọrụ maka ndị ahịa na ndị ọbịa na Satọdee, Ọktoba 15.
Mgbe ụlọ ahịa ikpeazụ mepere Mexico Izu gara aga, Apple gara n'ihu na-emepe ma na-emeghe ụlọ ahịa gburugburu ụwa mana ha ka dị ole na ole maka ọtụtụ nde ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ nwere. Ka anyị nwee olileanya na ha ga-emepe ụlọ ahịa ma ọ kachasị n’ebe ndị ụlọ ọrụ gọọmenti na-anọghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Na Ọktọba 15, Apple ga-emepe ụlọ ahịa Regent Street
Apple ga-ejikọ ndị ọrụ ya iji melite ọrụ
Locko - Paswọdu njikwa na faịlụ vault n'efu maka obere oge